Notimia, Masoivohom-Baovao Meksikana Manome Fitenenana Ny Indizena Sy Ireo Taranaky Ny Afrikana · Global Voices teny Malagasy
Notimia, Masoivohom-Baovao Meksikana Manome Fitenenana Ny Indizena Sy Ireo Taranaky Ny Afrikana
Mpanoratra Mercedes Matz Nandika (en) i Teodora C. Hasegan, Amadou Lamine Badji, Lauren RAJAOBELINA
Voadika ny 20 Aogositra 2017 4:43 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Ελληνικά, Español
Tao amin'ny fivorian'ireo mpitati-baovao indizena sy manana fiandohàna afrikana tany Oaxaca, Meksika, 2015. Sary : Mikel Blasco/CCEMx (Foiben'ny Kolontsaina Espaniola). Sary nampiasaina rehefa nahazoana alàlana tamin'ny Labaoratoara Dizitalin'ny Olom-pirenena.
Miaraka miady tsy an-kiato amin'ny fanavakavahana ireo vondrom-piarahamonina indizena sy taranaky ny afrikana any Meksika, ady mba hanànana fijery tsara sy fiarovana ny zony. Endrika maro no isehoan'ireo sakana sy loza atrehan-dry zareo : ny fanenjehana, ny famonjàna, ny tsy fitoviana, ny fanavakavahana, eny fa hatramin'ny fanerena hifindra toerana sy ny famonoana noho ny fanoherana ny fitrandrahana ny harena voajanahary ao amin'ny taniny.
Asehon'ireo angon'ny fanadihadiana teo anelanelan'ireo fanisàna tamin'ny 2015 voaangon'ny Filànkevitra nasionalin'ny Mponina any Meksika fa manodidina ny 17 tapitrisa ireo olona mihevi-tena ho indizena, noho ny kolontsainy, ny tantara sy ny fombandrazana. 6,5 isan-jaton'io isa io no miteny ny fitenin'ny indizena. Amin'ireo indray dia ny 80 isan-jato no miaina ao anatin'ny fahantrana sy mijaly noho ny fahatarana amin'ny fianarana ary ny herisetra atao amin'ny vehivavy, araka ny lahatsoratra iray navoakan'ny fikambanana México Social, tetikasa fampiroboroboana ny zon'olombelona sy ny sosialy amin'ny ‘multimedia’.
Amin'ny fomba fijery hafa, dia mponina iray amin'ny 100 any Meksika no taranaky ny afrikana, izany hoe olona 1.381.853, araka ny tatitra navoakan'ny Kômisiona nasionalin'ny Zon'olombelona (CNDH) miaraka amin'ny Foibe nasionaly miandraikitra ny antontan'isa sy ny jeografia (INEGI) ary ny Filànkevitra nasionaly miady amin'ny fanavakavahana (CONAPRED). Aseho'io tatitra io ihany koa fa 18 isan-jaton'ny mponina no miteny amin'ny fitenin'ny indizena, nefa ny roa ampahatelony no misora-tena ho indizena.
Tao amin'ny fivorian'nireo Mpitati-baovao Indizena sy manana fiandohana afrikana tany Oaxaca, Meksika, 2015. Sary : Mikel Blasco/CCEMx. Sary nampiasaina rehefa nahazoana alàlana tamin'ny Labaoratoara Dizitalin'ny Olom-pirenena.
Fa ankoatra ny ady lavarenin'izy ireo ho an'ny zony sy hanoherana ny fepetra sosialy tena ratsy, dia manana zavatra tsara iraisana ireo vahoaka roa ireo : ny Notimia, masoivohom-baovao noforonin'ireo indizena mpaka sary, mpanao lahatsary, mpanao sarimihetsika sady taranaky ny afrikana.
Io fomban-tserasera, mandray an-tànana ireo filàn'ny vehivavy sy mikendry ny fihainoan'ny iraisam-pirenena io, dia hanao voady ny hanome toky ireo vondrom-piarahamonina izay nampanginina sy nampanjavonina. Ireo resaka matetika tsy ahoan'ny haino aman-jery mahazatra, toy ny hetsika, ny hetsi-panoherana ary ireo olana mahazo ny vahoaka indizena ary ireo taranaky ny afrikana isan'andro amin'ny toerana rehetra no iandraiketany. Ny tanjona dia ny hanànana fifandraisana amin'ny ambaratonga samy hafa : ao amin'ny vondrom-piarahamonina ihany, any amin'ny tontolo nasionaly sy ny iraisam-pirenena.
Nolazain'i Guadalupe Martinez, mpamorona sady tonian-dahatsoratry ny Notimia tamin'ny fisehoany tamin'ny gazety tany Mexico tamin'ny 5 Aprily 2017 fa ny fampiroboroboana ny serasera ara-kolontsaina no nataon'ny masoivohom-baovao. Mikatsaka ny hamorona sy hanapariaka ny fomba fifandaminana ao amin'ny vondrom-piarahamonina sy ireo vahoaka indizena amin'ny fitenin-dry zareo indizena sy handika izany amin'ny fiteny hafa izy. Nandritra io fotoana io – izay nalefa tsy an-kiato tamin'ny aterineto – Mardonio Carballo, poeta sady mpanoratra amin'ny teny náhuatl, dia nanamafy ny maha-zava-dehibe ny fanongilanàn-tsofina amin'ny feon'ny vehivavy indizena :
Es necesario que su propia voz sea la que se escuche, que sean ustedes hablando por ustedes mismas.
Ilaina ny handrenesana ny feonareo, ny hitenenanareo, ianareo mihitsy.
Nanambara fotsiny ihany koa i Carballo ho fanamarinana fa zava-dehibe ny hitarihana ireo orinasa mikirakira ny asa fanaovana gazety miandraikitra vondrom-piarahamonina mba hanasongadina ireo olana izay matetika afenina. Ao amin'ny firenena manana karazam-pitenenana 69, dia zavamisy marina ny tsy fisian'ny orinasa mikirakira ny asa fanaovana gazety.
Eso lo tenemos que cambiar estando atentos en muchos sentidos, desde adentro (de las comunidades) y hacia afuera.
Tsy maintsy ovaintsika amin'ny fahamalinana amin'ny fomba maro io toedraharaha io, avy ato anatiny (vondrom-piarahamonina) sy mankany amin'ny tontolo ivelany.
Tao amin'ny resadresaka ho an'ny mpanao gazety ho fampahafantarana ny Notimia tany Mexico,2017. Sary : Ane Sanz/CCEMx. Sary nampiasaina rehefa nahazoana tamin'ny Labaoratoara Dizitalin'ny Olom-pirenena.
Ny Fivondronan'ny vehivavy indizena avy ao Amerika Afovoany sy Meksika izay ivondronan'ireo mpitati-baovao 300 avy any Amerika sy 200 avy any amin'ireo fanjakana samihafa any Meksika no ekipa voalohany mitantana ny Notimia. Mpikambana ihany koa amin'ny Firaisamben'ny mpitati-baovao indizena sy taranaky ny afrikana (ECIA) ilay masoivohom-baovao, ny ECIA izay mivory isantaona ho fanamafisana ny ezaky ny indizena mba hamoronana fomba fiseraseràna ho an'ny fandriampahalemana.
Manaparitaka lahatsoratra maro manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fanamafisana ny fijerena ny vahoaka madinika ny tranonkalan'ny Notimia. Isan'ireo lohahevitra norakofana ny lamaodin'ny foko, ny vehivavy mpanao gazety ary ny zon'ny vahoaka indizena.
Roa volana taorian'io hetsika io, dia naharakitra mpanaraka maro tao amin'ny haino aman-jery sosialiny ihany koa ny Notimia, toy ny ao amin'ny pejy Facebook-ny mitondra ny lohateny hoe “Notimia : Masoivohom-baovao ho an'ny vehivavy indizena sy taranaky ny afrikana“.
Nandika (en) i Teodora C. Hasegan
Nandika (fr) i Amadou Lamine Badji